Baarlamaanka K/Galbeed oo la ka Direy – Hareerley News
Maanta oo Talaado ah ayaa qorsuhu ahaa in uu furmo kal-fadhiga 8aad ee Golaha Wakiilada Koonfur Galbeed,kaas oo ahaa kulankii ugu dambeeyey,hayeeshee gebi ahaanba la joojiyey.
Magalada Baydhabo waxaa ku sugan Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan & Dhigiisa Jabuuti Maxamed Cali Xaamud,kuwaas oo doonayay inay ka qeyb galaan munaasabada furitaanka,balse kulanka uu baaqday.
Wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in sababaha ugu weyn ee kulanka u baaqday uu yahay inay socotay qorsho ah in mudada loo kordhiyo Golaha Wakiilada taasi oo keentay in la isku khilaafo sidaasina uu kulanka ku baaqday.
Mid kamid ah Golaha Wakiilada Koonfur Galbeed ayaa Risaala u sheegay in Madaxda koonfur Galbeed ay isku raaceen in la kala diro maadaama Xubnaha Baarlamaanka koonfur Galbeed uu waqtiga xilheyntooda uu dhamaaday.
Sidoo kale waxaa la sheegay in Xildhibaannada waqtiga uu ka dhamaaday lagu wargeliyey inay tagaan deegaannada ay matalaan,isla markaana kalsooni ay kasoo raadsadaan si loo soo xulo Baarlamaanka Cusub ee Maamulka Koonfur Galbeed.
Doorasho muran wadata oo maanta ka dhaceysa Kismaayo….
Magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ah ee dowlad Goboleedka Jubaland ayaa lagu wadaa in ay maanta ka dhacdo doorasho uu ugu cad cadyahay Axmed Madoobe. Afar Musharrax uu isaga ku jiro ayaa waxaa ay ku tartamayaan kursigaas iyada oo musharrixiinta ay ka mid tahay Haweeney dooneysa in ay madaxweyne ka noqoto Jubaland. Doorashada Maanta ka […]
(Daawo):- R/W Xasan Cali kheyre Oo Tahniyada Ciida Carafo u direy dhamaan shacabka Soomaliyeed Gudaha iyo Dunida Daafaheeda ku Noolba.
Posted on August 10, 2019 August 11, 2019 Author Hareerley News
(Daawo):- R/W Xasan Cali kheyre Oo Tahniyad u direy Ciida Carafo dhamaan shacabka Soomaliyeed Gudaha iyo Dunida Daafaheeda ku Noolba. Halkaan hoose ka Daawo
Dowlada FS Oo farriin Mahad celin ah u dirtay Soomaaliland
Posted on August 6, 2019 August 6, 2019 Author Hareerley News
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay odayaasha dhaqanka ee dhawaan Hargeysa kula kulmay Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi. Nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo hoggaaminayay odayaashii dhaqanka ee Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi kala soo wareegay 19-ka Maxbuus ee cafiska uu u fidiyay ayaa Ra’iisul […]
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo kormeer sameeyay:-(Sawiro)